Sadex Cayaaryahan oo uu Jose Mourinho midkood u doonayo badalka Paul Pogba+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Sadex Cayaaryahan oo uu Jose Mourinho midkood u doonayo badalka Paul Pogba+Sawiro
(12-2-2018) Macalinka kooxda kubada Cagta Manchesteran United ayaa lasheegayaa in uusan ku qanacsanayn qaab Cayaareedka Cayaaryahanka dalka France ee Paul Pogba kaas oo uu soo saaray midkood Cayaratoydii uu ku badali lahaa.
Paul Pogaba oo labadalay kulankii shalay laga badiyey kooxdiisa isla Markaana kursiga keydka lageliyey CayaartiiHuddersfield Town ayaa waxaa aad loo hadal hayaa in uusan ku habooneyn booska uu ka Cayaarsiiyo Macalinkiisa Jose Mourinho in kasta oo uu Jose Mourinho ku adkeystey in uusan kabadali doonin Khadka dhexe uuna ka doonayo in uu Caawiyo daafacyada marna caawiyo Weerarka.
Hadaba Jose Mourinho ayaa doonaya midkood in uu soo qaato Sadex Cayaaryahan kuwaas oo qaban karaya shaqada uu qaban waayey Paul Pogba kuwaas oo dhamaantood ka dheela Khadka dhexe.
Cayaartoyda uu doonayo Mourinho waxaa ugu horeeya Xiddiga Julian Weigl.oo u Cayaara Borussia Dortmund waana 22 Sano jir kubada u dheela sida Cayaaryahanka dalka Jarmalka ee Toni Kroos waxaana doon doonayey Pep Guardiola.
Xiddiga labaad ee uu doonayo Jose Mourinho ayaa ah Ninka dalka Serbia ee khadka dhexe uga dheela Lazio Sergej Milinkovic-Savic kaas oo lagu Neynaaso the Sergeant waana Nin u dheela qaabka loo yaqaan box-to-box waana Nuuca uu doonayo Jose Mourinho.
Badalka 3 aad ee Paul Pogba booskiisa uu u doonayo Jose Mourinho ayaa ah Jorginho oo khadka dhexe uga Cayaara Napoli Ninkaan waxa uu isku darsaday dhisid iyo bur burin waana Cayaaryahan uu in badan indhaha laraacayey Macalin Jose Mourinho waxaana macquul ah in uu soo qaato Marka uu dhamaado Xiligaan.